Anụ ezi na zukini quiche - Ntụziaka | Ntụziaka
Ihe ọessụ forụ maka ụmụaka
Anụ ezi na Zucchini Quiche
Alicia tomero | 04/04/2021 18:00 | Emelitere ka 11/05/2021 13:06 | Menmụaka menus, Ntụziaka Chiiz
Ihe ndi ahu bu ndi achịcha savory na anyị nwere ike ịkwadebe maka ụmụaka n'egbughị oge. Ọ bụrụ na anyị enwetala mgwakota agwa iji mee ka ọ dabere na ntọala ya, anyị kwesịrị dozie ndochi, Debe ya n'elu mgwakota agwa ma akpọọ nkụ. N'etiti ihe ndị anyị nwere akwụkwọ nri, cheese, ude na akwa nke ga-abụ ihe ndị bụ isi ka anyị wee kwadebe nke a na-atọ ụtọ Quiche. N'okwu m, ejiriwo m achịcha achicha doziri ya, nke dịkwa ka ọ dị dị ka achicha dị mkpirikpi.
Ntụziaka ụdị: Anụ ezi na Zucchini Quiche
Nkwadebe oge: 35 m
Nri oge: 25 m
Oge niile: 1 pm
Mpempe akwụkwọ achịcha achịcha
Ọkara obere yabasị
150 g nke zukini
200 ml ude mmiri
60 g nke anwụrụ anụ ezi
Otu aka nke grated cheese na 3 chiiz
Mkpụrụ mmanụ oliv abụọ
Nnu na ose
Anyị jidere yabasị na zukini ma anyị bepụrụ ya n’ime obere mkpirisi. Ọ ga-adị obere ka a ghara ịhụ iberibe mgbe emechara achicha ahụ.
Na pan nke frying anyị gbakwunye ngaji abụọ nke mmanụ oliv anyị tinyekwara ikpo akwụkwọ nri. Anyị na-etinye ya ighe ruo mgbe ihe niile dị nro.
Anyị na-akwadebe ihe achịcha achịcha anyị wee gbasaa ya na igbe nri ehihie. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ite abụba ebu ntakịrị na butter anyị nwere ike ime ya. Ka achịcha puff anaghị ebili mgbe esiri ya na oven, anyị ga-eji ntụ ọka dụọ ntụ ọka ahụ dum. Anyị na-etinye ya na oven na 200 Celsius maka nkeji 10.
Na nnukwu efere anyị na-agbakwunye 200 ml nke ude, akwa abụọ na oge. Anyị na-akụ ihe niile nke ọma.
Anyị na-etinye akwụkwọ nri mere, grated chiiz na anụ ezi n'ime obere iberibe. Anyị na-eti ihe niile nke ọma ọzọ.
Mgbe anyị gụchara achịcha achịcha ahụ, anyị ga-atụba ngwakọta niile n'ime pan wee weghachi ya na oven ọzọ 15-20 nkeji ruo mgbe ịtọ.
Ozugbo anyị mere, anyị ga-eme ka ọ dị jụụ na anyị nwere ike iwepụ ịtọ ụtọ ya. Enwere ike iwere ya dị ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Menmụaka menus » Anụ ezi na Zucchini Quiche
Nduku na akwukwo nri omelette
Ero ihendori maka anụ, azụ, poteto ...
Njirimara Ezi ntụziaka
Nri isi nri: Uwe Salad 16 ngwa ngwa
Etu esi amata ma akwa adighi nma
Etu esi eme Donuts
Otu esi eme ka brownie na enweghị akwa
Ighe donuts na Thermomix, anyị nwere ihe eji megharịa ọnụ maka Ista
Idenye aha na Ntụziaka